トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Khangela isiseko umxhasi we nesendlu pa
Xa pa nesendlu iintlobo abathengi sele ngokuza evenkileni. Ngaba umntu othi ngamanye amaxesha uye kudlala, kodwa ndicinga ukuba ayikho kakhulu na ke kwisiseko umxumi, kwi pa parlour, abasetyhini basoloko iivenkile kunye nabasebenzi ofisi rhoqo iivenkile, okanye, abafana ezifana iivenkile, nto leyo ebangela ukuba uninzi , loo iyahluka kwakhona isiseko agent ezivenkileni.
pa parlour ukuba wonk 'ubani na, oluhlobo luni na iivenkile oko, ukuze kuqinisekiswe ukuba ngaba ithuba na, kwaye ugcine ujongo kwi kwisiseko somthengi, oko ngokumangalisayo iphumelele ithuba iphezulu.
ucinga izinto ezibonakala isiseko umthengi, kodwa kwimeko ukuba iqonga eyakhethwayo wachacha block, Kuxhomekeka kwisiseko somthengi, kukho kwakhona iqela crap umva enkulu kule theyibhile ukuhamba. Xa iivenkile yaso nasiphi na isiseko umxhasi kukuba ingaba amehlo injongo, yaye emva koko iinkcukacha ngakumbi ingcaciso yakho.
nam, kodwa ndicinga ukuba baye baliva pachislot ilizwi, yintoni abantu Pachipuro, kukuba xa uqala, kodwa musa ngqo akukho nzima ukubona. Njengoko iintshukumo ezininzi kumntu lowo kuthiwa Pachipuro kunye nezo zingaqeqeshwanga zobungcali, kukho itsheki ye data iimbotyi encinane. Kwakhona mini musa idlala ngokucacileyo, unayo iselula okanye Notepad, oko kumele ukuba ukujonga kwe data.
oku kuziphatha, kunokuba slingshot, kunye ngaphezulu kumngxunyana, kwiminyaka yakutshanje, nto ezifana abathengi amathole eenkunzi nokuba akukho oqeqeshiweyo, nani kwakhona kwenziwa ukuze uhlaziye idatha ngokwakho. Ethetha kwi
pa, ayeke ukusoloko ekubetha, njl, abantu idla ngokuba abathengi ukuba ukuhanjiswa ngesandla ezahlukeneyo kancinane, kukho amathuba Pachipuro. In, nesendlu pa kukho Pachipuro na, athi ukuba nesendlu pa ngaphandle, anditsho ngokucacile kube njalo. Pachipuro kukuthi, ukuhlalutya idatha yabo yemihla ngemihla evenkileni, uze ukubetha ngengqiqo lo mkhwa ezivenkileni.
ajolise ibhodi blue-chip ne indawo pin, oko kukutyelela.
Pachipuro nto leyo ngoku, zuza kusenokwenzeka ukuba sime, kodwa ukuba kukho kukuthi, isikhonkwane-kwindawo phakathi ezininzi iiyunithi, ezifana kumele zijolise mna, iivenkile itheyibhile elungileyo lincinane, ngokulula ukuwina engahlawulwayo cinga izinto ezinzima .
Pachipuro nto ukuba akukho ukufumana elingana lula ukuya evenkileni. Pachipuro, ekubeni le nguqulelo ukuze baphile kwi pa yengeniso, baze bazifake into enye, 's ibali akunakwenzeka ukuba engahlawulwayo. Professional kunokuba aim apho Iivenkile, kwaye ajolise evenkileni iintlobo zabasebenzisi benkonzo kubutha, nguye lo kungenzeka ukuba ukuwina emuva eliphezulu.
ezivenkileni nasiphi na isiseko umxhasi na, uthetha okulungileyo Miseka wenu, kunye nabathengi ukuba badlala ukuba akazi fans kakhulu, ezifana abantu abaye kuphela ixesha, kwaye kukho iindidi ngeendidi zabantu, ezamahala high-high quality kuma malungana kuya kuba lula. Isibakala sokuba isiseko abathengi loo iintlobo engenasiphelo kukuba ukuqokelela kukuba kukho kungenzeka ukuba kukho Ukuba kwisininzi kwakhona itafile kakhulu.
nabani na ukuya kanye kuphela ixesha, kusenokuba kuhle ingakumbi xa ukhetha ivenkile ukubona kwisiseko sabathengi. Ethetha pa, yimani kuphela Abantu badla ukuya amehlo ukuba akhethe, ngokubukela ngeenxa kakuhle, zama besilwela krele kakhulu.